अहिल्या अथवा अहल्या गौतम ऋषिकी पत्नी थिइन् । उनी चतुर्मुखी ब्रह्माजीकी मानस पुत्री थिइन् । ब्रह्माजीले संसारकै सबैभन्दा सुन्दर नारीको रुपमा अहिल्यालाई रचना गरेका थिए । अहिल्या यती सून्दर थिइन् की जसको रुपजालमा फँसेर स्वर्गका राजा देवराज इन्द्रले हजार योनीज हुनु परेको थियो । हिन्दू धर्मका सबै धार्मीक ग्रन्थहरू जस्तै :- वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदी प्रमुख ग्रन्थहरूमा अहिल्याको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
३ इन्द्रद्वारा अहिल्याको चिरहरण
४ इन्द्र र अहिल्यालाई गौतमको सजाय
४.१ अहिल्यालाई ढुङ्गामा परिणत
४.२ इन्द्रलाई कारवाही
अहिल्या शब्दको अर्थसम्पादन
तर अहिल्यालाई सृष्टीकै सुन्दर नारीका रुपमा रचना गर्ने चतुर्मुखी ब्रह्मा स्वयंले अहिल्याको अर्थ "अति सुन्दर र कुनै पनि खोट नभएको भन्ने हो" भनि देवराज इन्द्रसँग भनेका छन् । यो कुरा रामायणको उत्तर काण्डमा उल्लेख छ । त्यस कारण अहिल्या शब्दको अर्थका बारेमा वैद्धिक, पौराणिक, प्राचिन हुँदै अहिलेका समयसम्म पनि निरन्तर बहस चल्दै आएको छ । वास्तवमा अहिलेसम्म गरिएको सन्दर्भ सामग्रीको अध्यायन अनुसार र अहिल्याको सुन्दरताको बिषयलाई आधार मान्ने हो भने अहिल्याको अर्थ ब्रह्माजीले भने अनुसार नै हो । हामीहरूले त्यही भनाइलाई विश्वास गर्नु पर्ने हुन्छ । किनकी ब्रह्माजीले सुन्दरी उर्वसीको सुन्दरताको घमण्ड चुर गर्न उनी भन्दा पनि महासुन्दरीको रुपमा मन्त्रद्वारा पुत्री अहिल्याको रचना गरेका थिए । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ की अहिल्या शब्दको अर्थ अति सुन्दर भन्ने नै हुन्छ ।
सृष्टीकी सबैभन्दा सुन्दर नारी तथा ब्रह्माजीकी मानस पुत्री अहल्याको विवाह महर्षि गौतमसँग भएको थियो । यो विवाह पौराणिक कालको अत्यन्त चर्चित विवाह हो । यो विवाह सम्बन्धका बारेमा प्रायः सबै पुराणहरूमा उल्लेख छ । गौतम ऋषिको विवाह अहल्यासँग हुँदा अहल्या निकै कम उमेर (लगभग १८ वर्ष) की थिइन् जबकी महर्षि गौतम वृद्ध भइ सकेका थिए । तर पनि त्यो विवाह ब्रह्माजीले आफै गराएका थिए । विवाहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट वरको छनौट गरिएको थियो । ब्रह्माजीले त्यस समयका सबै ऋषिमुनीहरू तथा देवताहरूलाई भेला गराई एक युगान्तकारी समारोहको आयोजना गराए । र, भने तपाइँहरू मध्य जो तीनलोकको परिक्रमा गरेर पहिले यहाँ पुग्छ, म उसैलाई मेरी छोरी अहिल्याको हात सुम्पने छु । यो सुनेपछी सबै ऋषिमुनीहरू र देवताहरू मात्र हैन देवताका राजा इन्द्र समेत त्यो प्रतियोगितामा सामेल हुन तयार भए । किनकी अहल्या धर्तीकी सबैभन्दा सुन्दर नारी थिइन् । ब्रह्माजीले स्वर्गकी परी उर्वशीको सुन्दरताको शाख झार्नको लागि अहल्याको रचना गरेका थिए । अहल्या यति सुन्दर थिइन् कि उनको सुन्दरताले वृद्ध महर्षि गौतमदेखि देवताका राजा ईन्द्र स्वयं प्रतिस्पर्धाका लागि तयार भए ।  यसरी प्रतियोगिताको तयारी भइसके पछि तीनै लोकको परिक्रमाकालागि सबै ऋषिमुनी तथा देवताहरू गए । तर, महर्षि गौतम प्रतिस्पर्धा स्थलमा नै बसिरहे । यो देखेर सबै छक्क परे । त्यसैबेला गौतमले आफ्ना सहयोगीलाई सुरभी नाम गरेकी गाईलाई ल्याउन संकेत गरे र गाई ल्याइयो । अनि गौतम ऋषिले ब्रह्माजीको ध्यान आकर्षित गर्दै भने- "ब्रह्माजी म एकै पटक तीनै लौकको परिक्रमा गर्छु हेर्नुहोस् । पवित्र गाई सुरभीको तिन पटक परिक्रमा गर्दै भने- "सुरभी भन्दा बढी तीन लोक अन्त कहाँ छ र ? त्यसैले मैले सोचें तीन लोक घुम्नु भन्दा गौमाता सुरभीको परिक्रमा गर्नु उत्तम हुन्छ ।"  यो देखेपछि चतुर्मुखी ब्रह्माजी खुसीले गद् गद् भए र भने- "हे महर्षि गौतम जी म तपाईंदेखी प्रसन्न भएँ । आज मलाई विश्वास लाग्यो कि तपाईं वास्तवमा सिद्ध पुरुष हुनु भएछ । वास्तवमा तीन लोक र गौमातामा कुनै फरक छैन । मैले त देवताहरू र ऋषिमुनीहरूको परीक्षा लिएको हुँ, सबै अहल्याको सुन्तरता देखेर अन्धाभई तीन लोक तिर भागे तर तपाइँले वास्तविक कुरा बुझ्नु भएछ विचार पुर्याउनु भयो, म तपाईंदेखि धन्य भएँ ।" चतुर्मुखी ब्रह्माका मुखारविन्दुबाट यो सुनेपछि समारोहमा उपस्थित भिंड हर्षले गद्गद् भयो । ब्रह्माले घोषणा गरे मेरी सुन्दर छोरी अहल्याको विवाह महान ऋषि गौतमसँग हुनेछ । यसका लागि उनी नै उपयुक्त वर हुन् ।  यतिभन्दै सुन्दरी अहल्या र महर्षि गौतमको विवाह सुरू भयो कैयौँ दिनसम्म चलेको विवाह नसिकिंदै देवताका राजा ईन्द्र आफ्नो दैविक शक्तिको प्रयोग गरी तीनै लोकको परिक्रमा सकेर आइपुगे । उनी आफू विजय भएको भन्दै हतार हतारमा ब्रह्माजी कहाँ गई सुन्दरी अहल्याको हात माग्न खोज्दा उता त अहल्या र महर्षि गौतमको विवाह हुँदै थियो । यो देखेर ईन्द्र अचम्भित हुँदै ब्रह्माजीका सामुन्य गएर भने- "हे ब्रह्माजी मैले तीन लोकको परिक्रमा गरेर तर प्रतिस्पर्धामा जाँदै नगएका वृद्ध गौतम ऋषिलाई छोरी दिएर किन आफ्नो वाचा तोडेको ?" उनको प्रश्न सुनेर ब्रह्माजीले हाँस्दै भने- "हे देवराज ईन्द्रजी मैले तपाईं देवताहरू र धर्तिका महर्षि ऋषिहरूको शारीरिक बलको परीक्षा लिएको हैन । मैले त तपाईंहरूको दिव्यताको परीक्षा लिएको हुँ । तपाईंहरूको सिद्धताको परीक्षा लिएको हुँ । तर, तपाईंहरूले तीन लोक घुमेर आउनेले मेरी छोरी अहल्याको हात पाउने भन्ने वित्तिकै आँखा र विवेक बन्द गरेर मुर्खतापूर्वक परिक्रमा गर्न भाग्नु भयो जबकी सिद्ध महर्षि गौतमले आफ्नो सिद्ध वौद्धिकताको प्रयोग गरी मेरो चुनौतीको पहचान गरे, मैले भन्न खोजेको कुरा बुझे र उनले तीनै लोकभन्दा महान र पवित्र गौमाताको तीन पटक परिक्रमा गरेर यो चुनौतीको पूरा गरिदिए । जुनकुरा तपाईं देवराजका दिमागमा पनि आएन । त्यसैले तपाईंले प्रत्यक्ष तीनलोक परिक्रमा गरेर आउँदा समेत यो प्रतिस्पर्धामा असफल हुनुभयो । महर्षि गौतम कतै नगए पनि आफ्नो तिक्ष्ण वौद्धिकताको प्रयोग गरेर यो प्रतिस्पर्धामा प्रथम भए । त्यसैले उनले मेरी सुन्दरी छोरी अहल्याको हात पाए ।"  यो भन्दै ब्रह्माजीले थप भने- "मैले यो प्रतिस्पर्धा आयोजना गर्नुका मुख्य तीन उद्देश्य थिए ।
सबै देवता र ऋषि महर्षिहरूको सिद्धताको परिक्षण गर्नु ।
धर्तिमा गौमाताको महत्व र महिमा फैलाउनु ।
इन्द्रद्वारा अहिल्याको चिरहरणसम्पादन
देवराज ईन्द्र महर्षि गौतम प्रति निकै रिस्सियका थिए । किनकी सुन्दरी अहिल्यालाई पाउन तीन लोक परिक्रमा गरेर आउँदा पनि बह्माजीले अहिल्याको विवाह महर्षि गौतमसँग गराई दिएका थिए । आफूले झण्डै प्राप्त गरिसकेकी सुन्दरी अहिल्यालाई गौतमले लगिदिंदा देवराज ईन्द्र रिसाएर विवाह समारोहमा नै भनेका थिए, अहिल्यालाई पत्नी बनाउन नपाए पनी म यिनीसँग योनक्रिडा चाहीं कुनै पनि हालतमा गरी छाड्ने छु । यस्तो प्रतिज्ञा गरेर ईन्द्र विवाह स्थलबाट गएका थिए ।  उता महर्षि गौतम अत्यन्त वृद्ध अवस्थामा हुँदा सुन्दरी अहिल्यासँग विवाह भएको थियो । विवाह पछि महर्षि गौतम र अहिल्या गोदावरी नदीको किनारामा रहेको मिथिला वन स्थित आश्रमा बस्दथे । हिन्दू ग्रन्थ रामायणका अनुसार महर्षि गौतम सधैँ प्रातः स्नानगर्न आफ्नो आश्रमबाट टाढा रहेको पवित्र नदी गंगामा जाने गर्दथे । एक दिन ईन्द्रको योजना अनुसार मध्य रात्रीमा चन्द्रमा कुखुराको भेषमा महर्षि गौतमको आश्रम नजिकै गएर कुखुराको आवाज निकालेर कराउन थाले । कुखुराको आवाज सुनेर महर्षि गौतमले प्रातकाल भएको सोचे । महर्षि गौतम गंगामा प्रातः स्नान गर्न आश्रमबाट निस्के । जब महर्षि गौतम आश्रमबाट गंगा नदीमा पुगे त्यही मौका छोपी ईन्द्र गौतम ऋषिको भेषमा नदीबाट नुहाएर फर्के झैं गरी अहिल्या मात्र रहेको आश्रमा आइपुगे । अहिल्याले छक्क पर्दै भनिन् - "हे महर्षि देव त्यती टाढाको गंगा नदीमा पुगेर यती चाँडै फर्किनु भो ।" उनको प्रश्नको जवाफ दिंदै महर्षि गौतमको भेषमा आएका देवराज ईन्द्रले भने - "हो म चाँडै आएँ, म गंगा नदीमा नगएर गोदावरीमा नै स्नान गरेर आएँ । खै किन म आज तिमी प्रति अरू दिनको भन्दा निकै आकर्षित भएँ र आज पहिलो पल्ट प्रातः स्नान पछि अन्य नित्यकर्म भन्दा पनि तिमीसँग यौन क्रिडा गर्न मन लाग्यो । उनको यो भनाई सुनेर अहिल्याले छक्क पर्दै भनिन्- "हे महर्षि देव किन आज प्रातकालको नित्यकर्म नगरी यो सोच्नु भएको ।" यो सुनेर महर्षि गौतमको भेषमा आएका ईन्द्रले भने- "हैन मैले आज निकै शक्ति महसुस गरिरहेको छु, आज तिमी नाईं नभन ।" श्रीमानले अनुरोध गर्दा एक श्रीमतीले नमान्ने कुरै भएन र अहिल्या त्यसका लागि तयार भइन् । अनि गौतम ऋषिको भेषमा आएका ईन्द्रले अहिल्यालाई सम्भोग गरे ।  सम्भोग क्रिया नसिकिंदै गंगा नदीमा स्नान गर्न गएका गौतम पनि आश्रमा टुप्लुकै आई पुगे । उनले ईन्द्र र अहिल्या बीचको यौन क्रिडा देखे । रामायणमा भनिए अनुसार गौतम ऋषिको भेषमा आएका ईन्द्रले अहिल्यासँग शारिरिक सम्बन्ध राख्न सफल भए पछि गौतमको भेष त्यागी ईन्द्रको भेष लगी सकेका थिए । आफूसँग यौन सम्बन्ध राखिरहेको पुरुष आफ्नो पति गौतम ऋषि होइनन् भन्ने थाह पाए पनि यौन क्रिडा चलिरहेकोले अहिल्याले खासै आपत्ति जनाईनन् । जब यौन क्रिडा जोड तोडले चलिरहेको थियो त्यही बखत महर्षि गौतम आश्रममा आइ पुगेका थिए ।  आश्रममा भएको गतिविधी देखेर गौतम ऋषि अत्यन्त दुःखी र क्रुद्ध भए । अनि महर्षि गौतमले ईन्द्र र अहिल्या प्रति क्रुद्ध हुँदै दुवैलाई भयानक श्राप दिए । रामयणमा उल्लेख भए अनुसार गौतमले आफ्नो पत्नी अहिल्यालाई ढुङ्गामा परिणत गरिदिएका थिए । ईन्द्रलाई श्राप दिंदै भने- "हे देवराज ईन्द्र यदी तपाईंलाई स्त्रीको भोग गर्न त्यती नै सौख छ भने तिम्रो शरिरमा एक हजार स्त्री यौनाङ्ग होउन" भनि श्राप दिए । महर्षि गौतमको श्रापले अहिल्या उत्ति नै बेला ढुंगामा परिणत भइन् र ईन्द्रको शरिरमा १००० वटा योनीहरू बने ।
देवराज इन्द्र र अहिल्याको सम्बन्धमा पनि विभिन्न विद्वान र अध्यताहरूबीच विवाद रहेको पाइन्छ । सबैभन्दा पछि करिब १८ औं शताब्दिमा रामायणलाई तामिल भाषामा उल्था गर्ने तेलेगु भाषाका आदिकवि भेनकाता कृष्णप्पा नायकले अहिल्या र ईन्द्रको सम्बन्धका बारेमा फरक व्याख्या गरेका छन् । उनको व्याख्यालाई भारतिय इन्साइक्लोपीडियाले यस्तो व्याख्या गरेको छ ।:-
" अहिल्या एक रोमाञ्चक नारी थिइन् । ब्रह्माले उनलाई यही प्रयोजनकालागि अत्यन्त सुन्दरीका रुपमा रचना गरेका थिए । जब उनी जवान भईन् उनी ईन्द्रको प्रेममा परिन् । उनी ईन्द्रसँग विहे गर्न चाहन्थिन् तर बह्माले उनको विहे वृद्ध गौतम ऋषिसँग गरिदिए । उता ईन्द्र पनि अहिल्यालाई पाउन निकै लालायीत थिए । अहिल्याको विहे पछि ईन्द्र गौतम आश्रममा नभएको बेला उनलाई निरन्तर भेटिरहन्थे । साथै ईन्द्रले अहिल्यासँग निरन्तर कुराकानी गर्न र सूचना आदान प्रदान गर्न केही महिलाहरूलाई रैवारे राखेका थिए र तिनकै सहयोगमा उनीहरूको कुराकानी हुन्थ्यो । कुनदिन कहाँ भेट्ने भन्ने कुरा उनीहरूकै माध्यमबाट अहिल्या ईन्द्रलाई सूचना दिन्थिन् । त्यस्तै जब आश्रममा बुढा गौतम ऋषि अहिल्यासँग यौनसम्बन्ध राख्दथे अहिल्या मनमनै ईन्द्रसँग यौनसम्बन्ध राखिरहेको कल्पना गर्दथिन् । कम उमेरकी अहिल्यालाई सुरुसुरुमा महर्षि गौतम सन्तानउत्पादनको उमेर नपुगेकी भनेर शारीरिक सम्बन्ध राख्दैनथे । त्यसबेला अहिल्या मलाई सन्तुष्ट गर्न ईन्द्र यहाँ भइदिए हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्थिन् । वास्तवमा अहिल्या आनन्द पूर्वक ईन्द्रको प्रेममा थिइन् ।"
माथि उल्लेखित तथ्यलाई मान्ने हो भने त अहिल्या स्वयं ईन्द्रलाई चाहन्थिन् र अहिल्या आफै ईन्द्रलाई बोलाएर उनिसँग गोप्यरुपमा शारीरिक सम्बन्ध राख्थिन् भन्ने देखिन्छ । यस्तै कतिपय ठाउँमा ईन्द्रले अहिल्यालाई जबरजस्ती बलात्कार गरेको भन्ने उल्लेख छ । विद्वानहरूले ईन्द्र र अहिल्याको सम्बन्धलाई जसरी व्याख्या गरे ता पनि सबैले एक कुरा स्विकार गरेका छन् कि अहिल्या गौतम ऋषिकी श्रीमती थिइन् तर पनि उनी र ईन्द्रको बीचमा शारीरिक सम्बन्ध रहेको थियो । त्यो सम्बन्ध थाह पाएर महर्षि गौतम क्रुद्ध भइ उनीहरू दुइटैलाई नराम्रो श्राप दिएर कारवाही गरेका थिए ।
इन्द्र र अहिल्यालाई गौतमको सजायसम्पादन
अहिल्यालाई ढुङ्गामा परिणतसम्पादन
गौतम ऋषिले पत्नी अहिल्यालाई परपुरुष गमन गरेको भन्दै श्राप दिए । "पञ्चकन्या" नामक ग्रन्थका लेखक भारतीय विद्वान प्रदिप भट्टाचार्यले यस विषयमा लेखेका छन् । उनका अनुसार सामाजिक अपमानबाट बच्न गौतमले आफ्नी पत्नीलाई श्राप दिनु परेको थियो । त्यस्तै ब्रह्मवैवर्त पुराणले पनि अहिल्यालाई श्राप दिएर कुरुप ढुङ्गामा परिणत गरेको कथा उल्लेख गरेको छ । महर्षि गौतमले सुन्दरता र जवानीको घमण्ड गर्ने र परपुरुष गमन गर्ने आफ्नी पत्नी अहिल्यालाई साठी हजार वर्षसम्मकालागि ढुङ्गा बनोस् भनि श्राप दिएका थिए । यद्यपी पछि अरुको अनुरोधमा गौतमले श्राप फिर्ता लिएर उनलाई मनुष्य बनाएका थिए । ढुङ्गामा परिणत भएकी सुन्दरी अहिल्याले महर्षि गौतमसँग पटक पटक आफू निर्दोष रहेको र ईन्द्रले छल गरेर आफूसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको भन्दै आफूलाई माफ गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । ढुङ्गामा परिणत भएकी सुन्दरीको अवस्था देखेर त्यस समयमा देवता तथा ऋषिहरूले महर्षि गौतमसँग उनीमाथिको श्राप फिर्ता लिन आग्रह गरे । साथै महर्षि गौतम स्वयंले पनि अहिल्याको अवस्थादेखि दया मानेर उनको श्राप फिर्ता लिने निर्णय गरे । ढुङ्गामा परिणत अहिल्यालाई पुनः मानवीय चोलामा ल्याउन उनको ढुङ्गारुपी स्वरुपलाई अयोध्या राज्यका राजकुमार भगवान रामले आफ्नो पाउले छुनु पर्ने भयो । त्यसकालागि विश्वामित्रका साथमा आएका रामलाई गौतम स्वयंले भेटी आफ्नी पत्नीको ढुङ्गारुपलाई मानव रुपमा परिणत गरिदिन आग्रह गरे । उनको आग्रहलाई स्विकार्दै भगवान राम अहिल्याको ढुङ्गारुप भएको ठाउँमा आई आफ्नो पैतलाले छोएर फेरी मानव चोलामा परिणत गरेको भनी ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, पद्म पुराण, स्कन्द पुराण, रामायण, प्रदिप भट्टाचार्यको पञ्चकन्या, भेनकाता कृष्णप्पा नायकको तेलगु भाषाको राम चरित्र नामक पूस्तक तथा ग्रन्थहरूमा स्पष्टरुपमा उल्लेख छ । यि सबै ग्रन्थमा उल्लेख यस प्रसंगलाई भारतीय इन्साइक्लोपीडियाले सटिक र सश्लिषित रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि अहिल्याबाट महर्षि गौतमका एक छोरा जन्मेकै थिए । महर्षि गौतमका अहिल्याबाट जन्मेका छोराको नाम सतानन्द राखिएको थियो । पछि गएर सतानन्द निकै विद्वान ब्राह्मण भए । सतानन्दलाई मिथिला राज्यका राजा जनकले आफ्नो राज्यका राज पुरिहीत बनाएका थिए ।
महर्षि गौतमकी पत्नी अहिल्यासँग नाजायज सम्बन्ध राख्ने देवराज ईन्द्रलाई पनि गौतमले भयानक सजाय दिएका थिए । वास्तवमा सबैभन्दा आधिकारीक धारणा अनुसार इन्द्र र अहिल्याबीचको नाजायज सम्बन्धका मुलदोषी ईन्द्र नै थिए । उनले महर्षि गौतम र अहिल्याको विवाह मण्डपमा नै भनेका थिए, एक दिन कुनै पनि हालतमा अहिल्याको चिरहरण गर्ने छु भनेर किनकी उनले अहिल्यालाई पाउन हर सम्भव कोशिस गरेका थिए । उनले अहिल्याको लागि तीन लोकको सबैभन्दा पहिले परिक्रमा गरेका थिए । तीनलोकको परिक्रमा गर्ने प्रतिस्पर्धामा प्रथम भए ता पनि ब्रह्माजीले अहिल्याको विवाह महर्षि गौतमसँग गरिदिंदा ईन्द्र अत्यन्त क्रुद्ध भएका थिए । त्यही रिस मेट्न वा आफ्नो अठोट अनुरुप यौन तृप्ती मेट्न भए पनि ईन्द्र अहिल्याको पछि लागेका थिए । उनले अनेक ट्रिक गरेर अहिल्यालाई आफ्नो चंगुलमा फसाएका थिए ।  यस विषयमा रामायणले सबैभन्दा राम्रो व्याख्य गरेको देखिन्छ । रामायणका अनुसार महर्षि गौतम प्रातः स्नान गर्न गंगा नदीमा गएको मौका छोपी ईन्द्र महर्षि गौतमको भेषमा आश्रमा आएर गौतमकी पत्नी अहिल्यालाई यौन सम्बन्धकालागि बाध्य पारेका थिए । अहिलेसम्म यही भनाईलाई आधिकारीक र मुख्य मानिएको छ । यस भनाईका अनुसार ईन्द्र अहिल्याबीचको नाजायज सम्बन्धका दोषी नै ईन्द्र थिए । उनले छल गरेर अहिल्याको चिरहरण गरेका थिए । अर्को तर्फ ईन्द्र देवताहरूका राजा थिए । उनी सुन्दरीहरूसँग योन क्रिडा गर्न तीनै लोकमा धाइरहन्थे । चतुर्मुखी ब्रह्माजीले सृष्टीकै सबैभन्दा सुन्दरी नारीका रुपमा अहिल्याको रचना गरेको सुन्नासाथ देवराज ईन्द्र अहिल्यासँग यौन क्रिडा गर्न लालायीत भइ सकेका थिए । आखिर उनले त्यो गरिछाडे । अर्थात ईन्द्र इस्त्रीको मामलामा निकै लोभी थिए । यो महर्षि गौतमलाई राम्ररी थाहा थियो र ईन्द्रको यो आचरण गौतमलाई मन पर्दैनथ्यो । त्यसैले आफ्नी पत्नीसँग ईन्द्रलाई यौनक्रिडा गर्दै गरेको देख्नासाथ गौतम रिसले क्रुद्ध भइ हे ईन्द्र तिमीलाई स्त्री मोह धेरै छ भने तिम्रो शरीरमा एक हजार स्त्री यौनाङ्ग हउन् भनेर श्राप दिए । गौतम ऋषिले यस्तो श्राप दिनासाथ ईन्द्रको शरीर भरी एक हजार स्त्री यौनाङ्ग उब्जिए र उनी कुरुप भए । शरीर भरी योनी नै योनी भए र उनको पुरुष यौनाङ्ग लुप्त भयो । यसरी योनी नै योनी भएको शरिर लिएर कसैको सामु जान ईन्द्रका लागि असम्भव भयो । उनी स्वर्गको आफ्नो दरबार भित्र लुकी बसे । यो देखेर तीनै लोकका ऋषि, महर्षि र देवताहरू अचम्भित भए । आफ्ना राजाको शरीरमा १००० योनीहरू भएको देखेर देवताहरू महर्षि गौतमाको आश्रममा आए र उनीसँग विन्ती गर्न थाले:- "हे महर्षि देव ! हाम्रा राजा ईन्द्रको यो हालत नगराइ दिनुहोस् । हामी बर्बाद हुन्छौं स्वर्गको व्यवस्था समाप्त हुन्छ । तपाइँ ईन्द्रलाई माफ गरिदिनुहोस् ।" साथै ईन्द्र स्वयंले पनि गौतम ऋषिका अघि पश्चाताप गर्दै आफूलाई त्यस हालतबाट मुक्त गरिदिन आग्रह गरे । सबैको विन्ती सुनेर तथा देवराज ईन्द्रको दयनिय हालत देखेर गौतमलाई पनि दया जागेर आयो । महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार गौतम ऋषि सबैको अनुरोधमा ईन्द्रलाई माफ गर्न तयार भए र उनले ईन्द्रलाई दिएको श्राप फिर्ता लिए । उनले श्राप फिर्ता लिनासाथ ईन्द्रको शरीरमा भएका एक हजार योनीहरू आँखामा परिणत भए । ब्रह्म पुराणले यस विषयमा यस्तो भनेको छ :- "गौतम ऋषिले श्राप दिएपछि ईन्द्रको शरीरमा एक हजार योनी भए र अन्तमा महर्षि गौतमले माफ गर्दै भने जाउ गौतमी नदी (गोदावरी नदी) मा स्नान गरेर आउ । ईन्द्रले गौतमी नदीमा नुहाएपछि उनको शरीरका एक हजार योनीहरू आँखामा परिणत भए र उनलाई माफी भयो ।
↑ १.०० १.०१ १.०२ १.०३ १.०४ १.०५ १.०६ १.०७ १.०८ १.०९ १.१० १.११ १.१२ १.१३ १.१४ १.१५ १.१६ १.१७ १.१८ १.१९ १.२० १.२१ १.२२ गौतम गोत्र एकता समाज नेपाल द्वारा प्रकाशित पुस्तक गौतम गोत्र वंश परिचय लेखक राजेश कुमार बटाला
विकिमिडिया कमन्समा Ahalya सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अहिल्या&oldid=851772" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २७ जुलाई २०२०, ११:३१
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ११:३१, २७ जुलाई २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।